Diiwaanadaada caafimaadka - Region Midtjylland
Du er her: Om os English Other languages somali Diiwaanadaada caafimaadka
Sida bukaan ahaan, waxaad xaq u leedahay in aad aragto diiwaanadaada caafimaadka oona qaadato nuqul ayaga kusaabsan haddii aad jeceshahay.
Haddii aad jeceshahay in aad aragto diiwaanadaada caafimaadka, keliya waxaad midaasi weydiisaa shaqaalaha.
Waxaad qaadan kartaa nuqul kusaabsan diiwaanadaada caafimaadka oo lacag la'aan ah, halka lacag yar labixiyo marka laqaadanayo nuqulada Raajitada. Xaaladaha qaarkooda, waxaa lagaaga baahnaan karaan in aad keento ama bixiso nuqul kusaabsan diiwaanadaada caafimaadka kuwaas oo ka ahaaday Dhakhtarkaaga Guud.
Diiwaanada caafimaadka Elaktarooniga ah (diiwaanka-E)
Diiwaanadaada caafimaadka elaktarooniga ah waxaa kujira macluumaad adiga kugu saabsan oo ka kala yimid dhammaan isbitaalada dadweynaha kuyaala Denmark.
Haddii aad tahay qof ka weyn da'da 15 sanno oona haysatid Aqoonsiga NemID, waxaad ka arki kartaa macluumaadka kujira diiwaanadaada caafimaadka elaktarooniga ah tooska boggaan internetka ah www.sundhed.dk. Waxaa dhici karta in aad sugtid 0–1 maalin kahor inta aadan arkin macluumaadkaaga.
Gudaha diiwaanadaada caafimaadka, waxaad ka arki kartaa macluumaad ladiiwaan geliyay kadib 1 Disembar 2009.
Mabedeli kartid kumana samayn kartid wax hagaajino ama bedelaad ah diiwaanadaada caafimaadka.